China Glass Bottle Beer Na-ejuputa igwe igwe na ngwa ahia | Higee
Ngwunye igwe anyi na-ejuputa ahihia na-ekpocha akwa, na-ejuputa na ntinye ihe n'ime igwe monoblock. The usoro na-rụrụ n'ụzọ zuru ezu na-akpaghị aka. Na-ejuputa karama PET ma ọ bụ karama iko ma ọ bụ karama niile nwere ike ịhazi.
Mpi Glass karama Beer dịanyā Machine Monoblock Production Line
1.Ber Bottle Screw feed
2.Beer kalama Na-ejuputa na Igwe Nchapu
Ngwa a na-ejuputa Beer na-ejide ugo nke na-ebufe teknụzụ iji ghọta nchacha, njuputa na ntinye. A kwadebere ya na njikwa nrụgide CO2 ziri ezi, nke mere na ọkwa mmiri mmiri na-adịgide adịgide. Ngwa nke ngwaọrụ mkpu maka karama jam, ụkọ karama, mmebi karama, ụkọ okpu, ịfefe wdg wdg n'ọtụtụ ebe na-egosi ogo nke mmepụta ya. Igwe ahụ na-enweta uru nke ntụkwasị obi dị elu, arụmọrụ dị elu, ọkwa dị elu nke akpaaka na ọrụ dị mfe, wdg.
Na-eji usoro karama na-eme ka nnyefe ya dị, nkwupụta karama ahụ kwụsiri ike; dị oke mma ma dị ngwa iji karama dị iche iche iji mejupụta otu igwe ahụ site n'ịgbanwe elu nke ebufe na ọtụtụ mgbanwe akụkụ.
Na Isobaric ndochi tiori, njuputa ọsọ bụ ngwa ngwa na nkenke dị elu; ndochi larịị kemeghi.
● Capping igwe nakweere France teknụzụ, ihe mkpuchi ya bụ magnet torque; mkpuchi okpu na-ejide ihe ugboro abụọ iji hụ na eziokwu ahụ bụ. Ihe mkpuchi nwere ike idozi, ihe nkwụnye ọkụ na-aga n'ihu agaghị emebi okpu yana okpu dị mma ma nwee ntụkwasị obi.
Nke gara aga: PITA karama ihe ọ Hotụ Hotụ Hot ndochi Machine
Osote: Igwe karama mmanya na-ejuputa ahihia